100% tijaabooyinka quraaradda lagu kalsoon yahay ee aan ku talinno | Ee kalluunka
Natalia Cherry | | Gargaarka
Tijaabooyinka quraaradda laguma talinayo oo kaliya, laakiin waxaa loo qaadan karaa inay tahay qasab si loo ilaaliyo tayada biyaha iyo hubinta caafimaadka kalluunkeena. Fudud oo aad u deg deg ah in la isticmaalo, waa aalad caawisa bilowga iyo xirfadleyda aquarism -ka labadaba.
Maqaalkan waxaan ku arki doonaa qaar ka mid ah su'aalaha ugu faa'iidada badan ee ku saabsan tijaabooyinka quraaradda., tusaale ahaan, maxay yihiin, sidee loo adeegsadaa, halbeegyada ay cabbiraan ... Iyo, si kadis ah, waxaan kugula talineynaa inaad sidoo kale eegto maqaalkan CO2 loogu talagalay aquariums -ka, mid ka mid ah walxaha ku jira biyaha oo ay tahay in la xakameeyo.
Qalabka BOSIKE 6 ee 1 Xariiq
Jidadka Imtixaanka RUNBO...
1 Maxaa loogu talagalay baaritaanka quraaradda?
2 Sida loo sameeyo baaritaanka quraaradda
3 Noocyada tijaabooyinka quraaradda
4 Waa maxay cabbirrada lagu xakameeyo baaritaanka quraaradda?
4.1 Koloriin (CL2)
4.2 Qoyaanka (PH)
4.3 Engegnaantiinna (GH)
4.4 Isku -darka nitrite sun (NO2)
4.5 Sababta algae (NO3)
4.6 Degganaanshaha PH (KH)
4.7 Kaarboon laba ogsaydh (CO2)
5 Intee jeer ayaad u baahan tahay inaad tijaabiso quraaradda?
6 Noocyada Tijaabada Aquarium -ka ugu Fiican
6.1 Hal ku dhig
7 Halkee laga iibsan karaa tijaabooyinka quraaradda raqiiska ah
Maxaa loogu talagalay baaritaanka quraaradda?
Xaqiiqdii waad hore u ogaatay, haddii aad leedahay quraaradda biyaha, taasi tayada biyaha ayaa muhiim u ah ilaalinta caafimaadka kalluunkayaga. Xayawaankani aad bay xasaasi u yihiin, sidaa darteed isbeddel kasta oo ku yimaada deegaankooda (iyo, sida iska cad, deegaankooda ugu dhow waa biyo) waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo xitaa ka sii daran xaaladaha qaarkood.
Tijaabooyinka quraaradda si sax ah ayaa taas loogu adeegsadaa, si aad u ogaato waqti kasta haddii tayada biyuhu wanaagsan yihiin. Si aad u ogaato, waa inaad ilaalisaa heerarka nitrite iyo ammonia, iyo kuwa kale. Sida aan arki doonno, baaritaannada quraaradda ma aha oo keliya markii ugu horreysay ee aan biyo gelinno, laakiin sidoo kale waa qayb joogto ah oo dayactirkeeda ah.
Sida loo sameeyo baaritaanka quraaradda
In kastoo dukaamada xayawaanka qaarkood waxay bixiyaan suurtogalnimada in lagu tijaabiyo biyaha ku jira quraaraddaada, halkan waxaan diiradda saari doonnaa xirmooyinka kuu oggolaanaya inaad gurigaaga ku samayso tijaabadaada taas oo, sababo muuqda awgood, ay yihiin kuwa kugu abuuri kara shakiga ugu badan, gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay aquarism.
Hawlgalka baadhitaannadu waa mid aad u fudud, maaddaama badankoodu ka kooban yihiin qaadashada muunadda biyaha. Muunadani waa midabo (dhibco ha ahaato ama dhibic hagto, ama si fudud adiga oo ku siinaya tirooyinka) waana inaad isbarbar dhigtaa miiska, lagu daray isla badeecada, taas oo kuu oggolaan doonta inaad hubiso haddii qiimayaashu waa sax.
Noocyada tijaabooyinka quraaradda
Marka, waxaa jira saddex siyaabood oo waaweyn oo lagu sameeyo baaritaanka quraaradda, waxay ku xiran tahay nooca xirmada: oo leh strips, dhibicyo ama qalab dijital ah. Dhammaantood si isku mid ah ayay u noqon karaan kuwo la isku hallayn karo, oo adeegsiga mid ama midka kale waxay ku xirnaan doontaa dhadhankaaga, goobta aad leedahay ama miisaaniyaddaada.
Baadhitaannada ka kooban xidhmada falliiqa ayaa aad u fudud in la isticmaalo. Caadiyan, dhalo walba waxaa ku jira dhowr strips oo qaliinkeedu aad buu u fudud yahay, maadaama ay si fudud uga kooban tahay in la marsiiyo falliiqa biyaha, la ruxruxo oo la isbarbar dhigo natiijada qiimayaasha ku qoran dhalada. Intaa waxaa dheer, qaar badan oo ka mid ah sumadaha iibiya tijaabada noocan ah waxaa ku jira barnaamij aad ku kaydin karto natiijooyinka oo aad isbarbar dhigi karto si aad u aragto isbeddelka biyaha ku jira quraaraddaada.
Imtixaanka Aquili 5 ee ...
Tijaabooyinka dareeraha ayaa ah habka kale ee weyn ee lagu falanqeyn karo tayada biyaha ku jira quraaraddaada. Isla markiiba fiidmeerta, waxay leeyihiin saamayn ka badan xargaha, maadaama ay ka kooban yihiin tuubooyin badan oo madhan iyo dhalooyin ay ka buuxaan walxaha. kaas oo aad ku tijaabin doonto biyaha (wax aad maskaxda ku hayso haddii aadan rabin in baaritaanadu ay qaataan meel bannaan oo badan). Si kastaba ha ahaatee, qalliinku waa mid sahlan: waa inaad si fudud u gelisaa tuubbooyinka biyaha quraaradda tuubooyinka oo ku dar dareeraha si aad u hubiso xaaladda biyaha.
Haddii aad doorato imtixaankan, marka lagu daro isku halaynta, hubi inay ku jiraan dhejiyeyaal si loo garto tuubbo kasta Oo si aadan si lama filaan ah ugu wareerin markaad imtixaanka qaadanayso.
Display Digital Gacanta ...
Ugu dambeyntii, imtixaannada nooca dhijitaalka ah, shaki la'aan, ayaa ugu saxsan suuqa, inkasta oo ay sidoo kale yihiin kuwa ugu qaalisan (in kastoo, sida iska cad, ay sii dheeraanayaan). Hawlgalkeeduna sidoo kale waa mid aad u fudud, maadaama ay tahay inaad qalinka ku riddo biyaha. Si kastaba ha noqotee, waxay leeyihiin dhibaato: waxaa jira moodooyin badan oo si fudud uga kooban tijaabada PH ama ugu badnaan cabbirro kale oo fudud, kuwaas oo, inkasta oo ay aad u sax yihiin, ka tagaan waxyaabo kale oo laga yaabo inaan danaynno cabbiridda.
Waa maxay cabbirrada lagu xakameeyo baaritaanka quraaradda?
Baadhitaannada quraaradda badankooda Waxay ku jiraan cabbirro taxane ah si loo cabbiro taasina waa waxa go'aaminaya haddii biyaha aad ku haysato quraaraddaada ay tayo yihiin. Sidaa darteed, markaad iibsanayso tijaabada noocan ah, hubi inay cabbiraan walxahan soo socda:
Chlorine waa walax aad u sun noqon karta kalluunka iyo xitaa sababa dhimasho haddii aysan ku jirin halbeegyada ugu yar. Intaa waxaa dheer, xuubkaaga osmosis ee gadaal ayaa laga badin karaa waxa ugu xunna waa in laga heli karo meelaha u dhow biyaha tuubada. Ku hay heerarka koloriin ee ku jira quraaraddaada min 0,001 illaa 0,003 ppm si tayada biyaha aysan u dhibsan.
Waxaan horay u sheegnay in kalluunku uusan taageerin isbeddellada biyaha, PH -na waa tusaale wanaagsan oo tan ah. Halbeeggaani wuxuu cabbiraa aashitada biyaha, taas oo, haddii ay ku dhacdo isbeddel yar, u keeni kara walaac weyn kalluunkaaga. oo xataa u dhinta, waxyaalaha saboolka ah. Waxaa muhiim ah inaad yeelato heerar PH oo cad xitaa markaad ka timaaddo dukaanka xayawaanka: waa inaad barataa kalluunkaaga adoo cabbiraya PH -ka dukaanka oo si tartiib tartiib ah ula qabsan doona kuwa haanta kalluunkaaga.
Sidoo kale, Aashitada biyuhu ma aha halbeeg go'an, laakiin waa isbedelaa waqti ka dibMarkay kalluunku quudiyaan, way nuugaan, dhirtu waxay noqotaa oksijiin ... sidaa darteed, waa inaad cabirtaa PH -ka biyaha ku jira quraaraddaada ugu yaraan bishiiba hal mar.
El Heerka PH ee lagu talinayo quraaradda biyaha waa inta u dhaxaysa 6,5 iyo 8.
Adkaanta biyaha, oo sidoo kale loo yaqaan GH (oo ka timaadda adkaanta guud ee Ingiriisiga) waa mid kale oo ka mid ah xuduudaha ay tahay in tijaabada aquarium -ka wanaagsan ay kaa caawiso inaad hagaajiso. Adkeynta waxaa loola jeedaa xaddiga macdanta biyaha ku jirta (gaar ahaan kalsiyum iyo magnesium). Waxyaabaha murugsan ee ku saabsan cabbirkan ayaa ah iyadoo ku xiran nooca quraaradda iyo kalluunka aad haysato, hal cabbir ama mid kale ayaa lagula talin doonaa. Macdanta ku jirta biyaha ayaa caawisa koritaanka dhirta iyo xayawaanka, waana sababta aysan cabbirkoodu u noqon karin mid aad u hooseeya ama aad u sarreeya. Waxaa lagu taliyay, oo ku jira quraaradda biyaha macaan, waa heerar 70 ilaa 140 ppm.
Isku -darka nitrite sun (NO2)
Nitrite waa cunsur kale oo ay tahay inaan taxaddarno, maadaama heerarkiisu cirka isku shareeraan sababo kala duwan awgoodTusaale ahaan, shaandhayn bayoolaji ah oo aan si fiican u shaqaynayn, adigoo kalluunka ku jira quraaradda quraacda ama quudin aad u badan. Nitrite sidoo kale way adag tahay in la yareeyo, maadaama lagu gaaro oo keliya isbedelada biyaha. Aad bay caadi u tahay in laga helo heerar sare oo nitrit ah aquariums -ka cusub, laakiin baaskiilka ka dib waa inay hoos u dhacaan. Xaqiiqdii, heerarka nitrite waa inay had iyo jeer ahaadaan 0 ppm, maadaama xitaa in yar oo ah 0,75 ppm ay culays ku keeni karto kalluunka.
Sababta algae (NO3)
NO3 sidoo kale waxaa loo yaqaanaa nitrate, oo ah magac aad ugu eg nitrite, runtiina waa laba walxood oo aad isugu dhow, maadaama nitrate -ku yahay natiijada nitrite. Nasiib wanaag, waa sun aad uga yar sunta nitrite, in kasta oo ay tahay inaad sidoo kale iska hubiso heerkeeda biyaha si aysan u lumin tayada, maadaama, sida PH, NO3 ay sidoo kale u muuqato, tusaale ahaan, burburka algae. Heerarka nafaqada ee ugu fiican quraaradda biyaha macaan ayaa ka yar 20 mg / L.
Degganaanshaha PH (KH)
KH wuxuu cabbiraa xaddiga kaarboonka iyo laba -karbonate ee biyahaSi kale haddii loo dhigo, waxay ka caawisaa dhexdhexaadinta aashitada maadaama PH si dhakhso ah isu beddelin. Si ka duwan cabbirrada kale, marka uu sare u kaco KH ee biyaha, ayaa ka sii fiican, maadaama ay macnaheedu tahay in ay yar tahay fursadda in PH si lama filaan ah isu beddesho. Markaa, biyo-biyoodka biyaha macaan, qiyaasta KH ee lagu taliyay waa 70-140 ppm.
Kaarboon laba ogsaydh (CO2)
Qodob kale oo muhiim u ah badbaadinta quraaradda (gaar ahaan kuwa la beeray) waa CO2, oo muhiim u ah dhirta si ay u fuliyaan photosynthesis, inkasta oo ay sun u tahay kalluunka heerar aad u sarreeya. In kasta oo diiradda lagu taliyay ee CO2 waxay ku xirnaan doontaa arrimo badan (tusaale ahaan, haddii aad dhir leedahay ama aadan lahayn, tirada kalluunka ...) celceliska lagu taliyey waa 15 illaa 30 mg halkii litir.
Intee jeer ayaad u baahan tahay inaad tijaabiso quraaradda?
Sidaad ku aragtay maqaalka oo dhan, aad bay muhiim u tahay in la sameeyo baaritaan biyaha quraaradda ah mar walba, in kasta oo ay ku xiran tahay waayo -aragnimada aad u leedahay mawduuca. Bilowga, tusaale ahaan, waxaa lagu talinayaa in la tijaabiyo biyaha labadii ama saddexdii maalmoodba mar, sida ka dib markii baaskiil lagu kaxeeyo aquarium cusub, halka khubarada baaritaanka la kordhin karo toddobaadkii hal mar, shan iyo tobankii maalmoodba mar ama xitaa bil.
Noocyada Tijaabada Aquarium -ka ugu Fiican
In kastoo waxaa jira tijaabooyin badan oo quraaradda suuqa ahWaxaa muhiim ah in la doorto mid wanaagsan oo la isku halleyn karo, haddii kale wax yar bay noo tari doontaa. Dareenkan, laba magac ayaa taagan:
Tijaabada Balliga Tetra 6 ee 1,...
Tetra waa mid ka mid ah sumadaha had iyo jeer ka jira adduunka aquarism. Waxaa la aasaasay 1950 -kii Jarmalka, waxay u taagan tahay oo keliya ma aha xariijimihii wanaagsanaa ee lagu tijaabin lahaa quraaradda iyo biyaha balli, laakiin sidoo kale alaabooyin badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin bambooyin, qurxin, cunto ...
Imtixaanka JBL Proaqua Easy 7 ...
Nooc kale oo Jarmal ah oo sharaf iyo isku halayn weyn leh, oo ka bilaabmay 1960 dukaan yar oo takhasus leh. Tijaabooyinka quraaradda JBL waa kuwo aad u casri ah, in kasta oo ay leeyihiin moodeel leh xargo, haddana takhasuskooda dhabta ah wuxuu ku jiraa imtixaannada dhibicda, kuwaas oo ay haystaan ​​dhowr baakadood oo aad u dhammaystiran, iyo xataa dhalooyin beddel ah.
Halkee laga iibsan karaa tijaabooyinka quraaradda raqiiska ah
Sidee u qiyaasi kartaa tijaabooyinka quraaradda ayaa laga heli karaa gaar ahaan dukaamada khaaska ah, maadaama aysan ahayn badeecad guud oo ku filan meel kasta laga heli karo.
Markaa, meesha laga yaabo inaad ka hesho tijaabooyinka ugu kala duwan si loo cabbiro tayada biyaha ku jira quraaraddaada ayaa ku jirta Amazon, halkaas oo ay ku yaalliin xargo -tijaabo, dhibco iyo digitals si loo bixiyo oo loo iibiyo, in kasta oo isla sumcaddani ay noqon karto waxoogaa qas ah, gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay mawduucan.
Dhinaca kale, gudaha dukaamo khaas ah sida Kiwoko ama TiendaAnimal Waxaa laga yaabaa inaadan ka helin kala duwanaansho badan sida Amazon, laakiin noocyada ay iibiyaan waa kuwo la isku halleyn karo. Dukaamadan waxaad ka heli kartaa baakado iyo dhalooyin keli ah, iyo weliba talo shakhsiyeed.
Waxaan rajeyneynaa maqaalkan ku saabsan tijaabooyinka quraaradda inuu kaa caawiyay inaad gasho adduunkan xiisaha leh. Noo sheeg, sidee u cabbirtaa tayada biyaha ku jira quraaradda? Miyaad doorbidaa imtixaanka xargo, dhibco ama digital? Ma jiraa astaan ​​aad si gaar ah ugu talineyso?
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Gargaarka » Imtixaanka quraaradda
Caddeeyaha biyaha quraaradda